Yiziphi izinhlelo zokuxwayisa zokuhamba ezihamba phambili?
I-Car Tech Imiqondo Eyisisekelo
Izinhlelo zokuxwayisa ukuhamba ngezinyawo ziyiqembu lobuchwepheshe bezokuphepha okuhloswe ngokuyinhloko ukuvimbela izingozi eziphakeme kakhulu ezinqamula emikhulu nasemigwaqweni emikhulu. Kunezinhlobo ezimbalwa ezihlukene zokuhamba kwendlela yokuxwayisa yokuhamba, futhi ezinye zazo zihamba kahle kunezinye. Ngokuxwayisa umshayeli, noma ngisho ukuthatha izinyathelo zokulungisa okuzenzakalelayo, lezi zinhlelo ziyakwazi ukuvimbela ukushayisana okuningi nezingozi zokugijima.
Umsebenzi Wokuxwayisa Ukuhamba Kanjani?
Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zokuhamba kwesobuchwepheshe bokuxwayisa. Ngenkathi bonke benenjongo efanayo, bafeza le njongo ngezindlela ezahlukene:
Isixwayiso sokuSuka kweLane (LDW) - Lezi zinhlelo zimelela ukuqala kokushayisana komshini wokuxwayisa wokuhamba, futhi zingabonakali kakhulu. Uma imoto ifakwe lolu hlobo lwesistimu idabula kude phakathi kwendlela yayo, umshayeli uthola isixwayiso. Umshayeli manje unesibopho sokuthatha isinyathelo sokulungisa.
I-Lane Keeping Assist (LKA) - Eyaziwa nangokuthi I-Lane-Keeping Systems (LKS) namanye amagama afanayo, le nguqulo yobuchwepheshe ihamba kancane kunezinhlelo zangaphambili ze-LDW. Uma imoto idlulela kude kakhulu kolunye uhlangothi noma enye, futhi umshayeli akasathathi isinyathelo sokulungisa, uhlelo luzosebenzisa i-torque esiteshini sokuqondisa. Ngaphandle kokuba umshayeli alwe ngokuqinile nesistimu, lokhu kungaphumelela ukubuyisela imoto phakathi nendawo.
Umsizi Wokusiza I-Lane (LCA) - Lena yindlela ehlaselayo kakhulu yobuchwepheshe. Esikhundleni sokunikeza isixwayiso, noma ukukhahlela kuphela uma imoto idabula emaphethelweni omzila wayo, lolu hlobo lwemvelo empeleni luyakwazi ukugcina imoto ehlala emigwaqweni yayo ngaso sonke isikhathi.
Izindlela zokuxwayisa kanye nokugcinwa kwemikhumbi zinganikeza izaziso noma zithathe isinyathelo sokulungisa ukugcina imoto ngendlela yayo. UJeremy Laukkonen
Izindlela zokuxwayisa zakuqala zokuhamba zijwayele ukusebenzisa ikhamera yevidiyo eyodwa ukuqapha imikhawulo, kodwa izinhlelo zanamuhla zingasebenzisa izinzwa zethambile, laser, noma ze-radar.
Izindlela lezi zinhlelo ezisetshenziselwa ukuhlinzeka ngezinyathelo zokulungisa zibuye zihluke kwezinye izimo.
Ezinye zezinhlelo zokuqala zokugcina umzila zasebenzisa izinhlelo zokulawula ukuzinza kwe- electronic ukugcina imoto ngendlela yayo. Lokhu kwafezwa ngokusebenzisa ukucindezela kancane kwe-braking kumavili afanelekile. Izinhlelo zanamuhla ziyakwazi ukufaka amandla noma ukulawula ukuqondisa kwe-elektroniki ukuze empeleni zihlinzekwe ngokuqondisa ukuqondisa.
Iyini i-Point of Lane Lane Ukusuka Ukuxwayisa Futhi Lane-Ukugcina Umsizi?
Ngokwe-National Highway Transportation Administration, cishe amaphesenti angaba ngu-70 azo zonke izimoto ezibulalayo ezihamba emgwaqweni e-United States zenzeka ezingozini zokugijima. Njengoba izingozi ezigijima emgwaqweni zenzeka lapho imoto ishiya indlela yayo futhi ihamba emgwaqweni, indlela yokuxwayisa indlela yokuhamba nayo ingakwazi ukusiza ukuvimbela izingozi eziningi ezibulalayo.
Ngokombono, ukuxwayisa ukuhamba okuhamba phambili kunamandla amakhulu. Eqinisweni, i-AAA ithi ukuxwayisa ukuhamba kwendlela kungaqeda ngokuphelele amaphesenti angaba ngu-50 azo zonke izingxabano.
Inkinga yukuthi idatha yangempela yokuhlola umhlaba ayizange iphile kuze kube yilokho okwamanje. Lokhu kungaba ngenxa yezinqola ezimbalwa ngaphandle lapho kuhamba khona isixwayiso sokuhamba, noma kungenzeka kube khona enye inkinga engakacaci.
Ngisebenzisa kanjani isimiso sokuxwayisa ukuhamba komzila?
Uma imoto yakho inendlela yokuhamba noma indlela yokugcina umzila, kuwumqondo omuhle ukuthola ukuthi uluphi uhlobo onalo. Njengoba lezi zigaba ezimbili zokuhamba ngezinyawo zinikeza amazinga ahlukene okuvikela, kubalulekile ukwazi ukuthi ungubani. Kubalulekile futhi ukuqonda ukulinganiselwa kwalezi zinhlelo.
Izimoto ezihlomele uhlelo lwe-LDW zizokhipha isilumkiso uma imoto yakho iqala ukuphuma emgwaqweni wayo. Uma ujwayele isixwayiso esizwakalayo noma ubheka ukubonakala okubonwayo kudatha yakho, uzokwazi ukuthatha isinyathelo sokulungisa ukuvimbela ingozi.
Uma imoto yakho ifakwe Usizo Lokugcina I-Lane-Keeping Assist, une-layer yokuvikela eyengeziwe. Noma kunjalo, lezi zinhlelo azizona izizathu zokushayela okuphazamisekile. Bakwazi ukuhlinzeka ngemali encane yokuqhaqha noma ukuqondisa, kodwa kusadingeka ukuba uhlale uqaphela indawo ozungezile noma nini lapho usendleleni.
Kungase kubonakale sengathi imoto enesandla se-LKA ne- adaptive control cruise ingakwazi ukushayela yona, kodwa ubuchwepheshe buyisabelo esimpofu somshayeli wokuqwashisa .
Ukukhetha uhlelo lokuxwayisa ukuhamba emgwaqeni
Njengoba ama-automaker ahlukene ahlukile aqala ukuxwayisa ukuhamba nokubuchwepheshe nobuchwepheshe bokugcina umzila, kunezinketho eziningi ezihlukene lapho. Ngakho uma usemakethe yemoto entsha, futhi wenza umgwaqo omkhulu wokushayela, kubalulekile ukuthatha lezi zinhlelo zibe yi-akhawunti.
Nazi ezinye zezici eziyinhloko okufanele uzibheke uma ucubungula imoto ehlanganisa indlela yokuxwayisa yokuhamba:
Izixwayiso ezizwakalayo - Ezinye izinhlelo zinikeza isixwayiso esizwakalayo lapho imoto ishiya phakathi kwendlela yayo. Lona uhlobo oluthile lokuxwayisa.
Izixwayiso ze-Haptic - Ezinye izinhlelo zinikeza uhlobo oluthile lwempendulo ye-haptic njengesixwayiso. Isondo lokudonsa lingadlidliza, noma isihlalo singadlidliza. Ezimweni eziningi, uhlangothi lwesondo noma isitulo esiduduzayo sizobonisa isiqondiso okudingeka uhambe kuso.
Izixwayiso ezibukwayo - Izinhlelo eziningi zinikeza futhi uhlobo oluthile lwezibonakaliso sokuxwayisa kudatha. Lokhu kungase kube njengokulula njengokukhanya kokuxwayisa noma okuyinkimbinkimbi njengomdwebo obonisa ukuthi yikuphi uhlangothi lomzila oye wawela kuwo.
Ukuqondisa okuzenzakalelayo - Ezinye izinhlelo ziyakwazi ukusebenzisa i-torque esiteshini sokuqondisa ukulungisa isimo semoto. Uma imoto inesici, kubalulekile ukuhlola i-drive bese unquma ukuthi kunamandla kangakanani okudingekayo ukunqoba lesi senzo sokulungisa uma kwenzeka ngesikhathi esibi. Uma uzizwa unamandla amakhulu kakhulu, kungase kube umqondo omuhle ukubheka ukwenza okuhlukile noma imodeli.
Yikuphi ukulinganiselwa kokuxwayiswa kokuhamba kwendlela nokuqapha ukugcina usizo?
Izindlela zokuxwayisa zokuhamba ezihambayo zanamuhla zithembeke kakhulu kunezinguquko zangaphambili zobuchwepheshe, kodwa ngisho nezibonelo eziphambili kakhulu kunemikhawulo.
Lezi zinhlelo zivame ukuthembela kolwazi olubukwayo ukulandelela isimo esiphathelene nesimo semoto ngaphakathi kwendlela yayo, ngakho noma yini ephazamisa umakaki wemigwaqo izokwenza ubuchwepheshe bube usizo. Lokhu kusho ukuthi ngokuvamile awukwazi ukuthembela ku-LDW yakho noma i-LKS emvula enamandla, iqhwa, noma uma kune-glare eyinqaba ukusuka elangeni.
Vula amasignali nakho kungavimbela indlela yakho yokuhamba noma indlela yokugcina umzila. Lezi zinhlelo zonke zenzelwe ukuvala uma isignali yokuvula ivuliwe, okuvimbela ubuchwepheshe ukuthi bukulwe noma nini uma ushintsha imizila. Uma ushiye ngephutha isignali yakho yokujika emva kokushintsha imigwaqo, uhlelo luzohlala luhlelekile.
Ingabe i-12V Defrosters Work, noma ingabe kukhona indlela engcono?
Okusemqoka kwe-Amplifier ye-Car Audio: Iziteshi, Amandla nokucaca
Ungakwazi Yini Ukubeka Umshini Wokubheja Nge-USB?
Ama-Equalizer kanye ne-Digital Sound Processors
Indlela Car Antenna Yenza Umsebenzi
Isaziso se-Automatic Collision Notification
Iyini i-Swamp Cooler ku-Automobiles?
Konke Mayelana Nezimboni Zamandla kagesi
Ingabe Izisebenzi Zendawo Zemoto Ezisebenzayo Zisebenza?
Ukuchaza umhlahlandlela wohlelo lwe-Apple TV
Indlela Spot Fake Inkohliso Torrent File
I-8 Best Koss Headphone Yokuthenga ngo-2018
Indlela Yokushintsha Usayizi We-Text ku-Outlook ne-Windows Mail
Iyini Isilinganiso sokuvuselela?
Ukubuyekezwa komkhiqizo: Spector Pro 6.0
Iyini imvelaphi kaPepe the Frog?
Uhlu lwe-Office Software Suites nezinhlelo zokusebenza ze-Windows
Izinhlelo ze-iPad ne-iPhone zesiphequluli se-iPhone
Funda ukuthi i-GM ye-OnStar Service Works
Indlela yokususa umlayezo ngokudlula udoti
Ngingayidlala kanjani amafayela weDaa?
Thola Amakhodi we-HTML abalingiswa bolimi lwesiRomania
Umehluko Phakathi kweDVD-Layer neDaily-side
Indlela yokuvula, ukuhlela, nokuguqula amafayela we-CSH
I-Ultimate Guide: Ukuthenga i-Computer for School
Ukubuyekezwa kwe-PS3: Mad Moxxi kanye nokubulawa kosuku lomshado
Ukuhamba Nekhamera Ngezindiza
Indlela Yakha i-Android USB Drive
Qalisa i-Software kumathuluzi amaningi e-Linux "nge-xhost"
Indlela Yokwenza I-IMAP ye-Gmail Ngokushesha Ngomgwaqo We-imeyili Ongahle
Yonke into ongayenza nge-Zillow